Naya Bikalpa | डीएलए महाधिवेशनमा गुटगत उम्मेदवार - Naya Bikalpa डीएलए महाधिवेशनमा गुटगत उम्मेदवार - Naya Bikalpa
डीएलए महाधिवेशनमा गुटगत उम्मेदवार
प्रकाशित मिती: २०७५ श्रावण १४, ०७: ३८: १९
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संगठन कानुन व्यवसायीहरुको संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) को नवलपरासीस्थित गैंडाकोटमा भएको १०औं महाधिवेशनमा गुटगत उम्मेदवारी परेको छ ।
डीएलए केन्द्रीय कार्य समितिको अध्यक्षमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार भएका छन् । पौडेल गुटबाट अलग भएका डा. कोइराला र सिटौलाले भने संयुक्त रुपमा एउटै प्यानल खडा गरेर उम्मेदवार बनाएका हुन् ।
सभापति देउवाको संस्थापन पक्षमा २ जना अध्यक्षको आकांक्षी बनेका छन् । नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निकट केदार कार्की र देउवा निकट रामकुमार श्रेष्ठले अध्यक्षको दाबेदारी नछोडेपछि संस्थापन पक्षमा रस्साकस्सी भएको छ ।
नेता पौडेल समूहबाट भने सीताराम केसी अध्यक्षका दाबेदार छन् । उनलाई डीएलएका पूर्वअध्यक्ष यदुनाथ खनालको समर्थन रहेको बुझिएको छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता सिटौलाले संयुक्त रुपमा डीएलए काठमाडौंका पूर्वअध्यक्ष तथा सर्वोच्च डीएलएका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
महामन्त्री कोइराला र सिटौलाले छुट्टै उम्मेदवार अध्यक्षमा उठाएपछि चिढिएका पौडेलले आप्mmना उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन् । तर कोइराला र सिटौलाले आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि पौडेलले रामकुमार श्रेष्ठ उम्मेदवार भए समर्थन गर्न सक्ने प्रस्ताव देउवालाई पठाएका थिए ।
पौडेलले देउवा समूहलाई पठाएको प्रस्ताव बमोजिम देउवा समूहले पनि श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा अघि बढाउने सम्भावना रहेको त्यहाँ रहेका डीएलए प्रतिनिधि तिलक पाण्डेले बताए । देउवा र पौडेल समूहबीच श्रेष्ठलाई अघि सार्ने बिषयमा सहमति हुन नसकेपछि अधिकारी नै अन्य नेताभन्दा अघि देखिएका छन् ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि तीन वटा समूहबीच कडा टक्कर हुने देखिएको छ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष एउटा पदमा देउवा समूहबाट अरुण पञ्जियार, पौडेल समूहबाट रामचन्द्र त्रिपाठी र कोइराला÷सिटौला समूहबाट सुरेश पौडेल उम्मेदवार बनेका छन् । पञ्जियार उपसभापति विमलेन्द्र निधि निकट हुन् । निधि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुँदा पञ्जियार उनकै कानुनी सल्लाहकार थिए ।
महिला उपाध्यक्षमा सुश्मा बाँस्कोटा बराल निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । उनी अध्यक्षका प्रत्यासी अधिकारीको प्यानलबाट उम्मेदवार भएकी थिइन् । त्यस्तै, एक नम्वर प्रदेशबाट मुरारी खड्का र दुई नम्वर प्रदेशबाट राजनप्रसाद दाहाल प्रदेश उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । दुवै उाध्यक्षहरु कोइराला र सिटौला समूहका हुन् ।
तीन नम्वर प्रदेशबाट तुलसी बास्तोला, थम्मलाल शर्मा र राजु कटवाल उपाध्यक्षका उम्मेदवार छन् । चार नम्वर प्रदेशबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएका फणिन्द्र राज कोइराला र भूमिश्वर शर्मा गौतम प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् । पाँच नम्वर प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा तीन वटै समूहबाट गोकर्णसिंह थापा, नन्दराम भण्डारी र रेशमराज गिरी प्रतिष्पर्धा गर्ने भन्दै चुनावी प्रचारमा लागेका छन् । ६ नम्वर प्रदेशबाट भने संस्थापन पक्षका खड्गबहादुर सिजापति उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
सात नम्वर प्रदेशमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित बीरबहादुर जेठारा पनि देउवा निकटका हुन् । एउटा महासचिवमा सात जना आकांक्षी भएका छन् । जसअनुसार कलमबहादुर खत्री, कृष्ण घिमिरे भूषण, बिना श्रेष्ठ, भरतबहादुर रावत, रामकुमार न्यौपाने, लक्ष्मीदेवी दाहाल रावल र सर्वज्ञराज नायले महासचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
एउटा सचिवमा आठजनाले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । खड्गबहादुर बुढाथोकी, नवराज खतिवडा, भिमप्रसाद पौडेल, बसन्त रिमाल, रामजी कोङरेङ, श्यामलाल श्रेष्ठ, लोकेन्द्रध्वज खाँड र हुमबहादुर खत्रीले उम्मेदवारीको तयारी गरेका छन् । सचिबमा उम्मेदवारी दिएका पौडेल र रिमाल नेता रामचन्द्र पौडेल निकटका हुन् भने खाँड र खत्री देउवा निकटका कानुन व्यवसायी हुन् ।
महिला सचिवमा समेत तीन जनाले प्रतिष्पर्धा गर्ने भएका छन् । जस अनुसार बिष्णु बस्याल, लक्ष्मी थापा र सम्झना पोखरेलले उम्मेदवारी घोषणा गरेर चुनावी प्रचारमा लागेका छन् । एउटा कोषाध्यक्षमा आठ जना र ६ वटा खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा २२ जनाले उम्मेदवारी दिएर प्रचारमा हाम्रा सम्वाददाताले बताएका छन् ।
२०७५ श्रावण १४, ०७: ३८: १९
नयाँ बिकल्प,पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा...